News - Sidee loo doortaa bogagga khaanadda saxda ah ee la qariyey?
Sidee loo doortaa bogagga khaanadda saxda ah ee la qariyey?
Macaamiisha qaar waxay i weydiisteen sida loo doorto qaanadda saxda ee hoose ee dhajinta? Maanta waxaan soo bandhigi doonaa noocyada hoose ee dhalada aan ku leenahay.
Qalabka Geriss wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo ah bogagagga khaanadaha qarsoon. Faahfaahinta waxaad ku booqan kartaa https://www.yangli-sh.com/undermount-drawer-slides/
Xulo midda kugu habboon ee ku taal qaybta hoose ee dhajinta dhalada, waa inaad ogaataa waxa qotoda dheer ee qaanadda hoose ee guddiga si aad u doorato dhererka slide ee hoose. Iyo sida ku xusan qaanaddaada khaanadda gudaha si aad u doorato bogagga saxda ah ee rakibidda qafiska. Sababtoo ah Geriss wuxuu qariyay orodyahannada khaanadda iyadoo loo eegayo shuruudda macaamiisha ee kala duwan si loo sameeyo isbarbar-dhig loo adeegsado guddiga 16mm ama 19mm. Macaamiisha qaar ayaa ku weydiin doona waa maxay guddiga 16mm ama 19mm? Hoos ka daawo sawirrada:
Max 16 = 16mm loox
Max 19 = loox 19mm
Sida ku cad sawirada la muujiyey, waxaad arki kartaa Max 19 khaanadda gudaha ku jirta ilaa qaanadda gudaha masaafada waa 25mm. Wixii loogu talagalay Max 16, khaanadda gudaha illaa kabadhka gudaha masaafada waa 21mm.
Markaad dhamaysid dooro cabbirka saxda ah ee orodyahannada dhaansha ka hooseeya. Waad awoodaa si waafaqsan shuruudahaaga si aad u doorato shaqooyinka duulaya ee gunta duula ee hoose. Geriss undermount runners wuxuu leeyahay Soft Close Full Extension oo qarsoodi ah Sawir Gacmeed, Riix Si Aad u Furato Iskordhinta Buuxda Oo Dheer Ah, Soft Close Mid Kordhinta Oo La Qariyay Slide, Kordhinta Kordhinta ah ee Lagu Furayo Buugga Hoos. Dhamaan shaqada waxaad dooran kartaa isticmaal boolal la hagaajin karo ama qalabka qufulka hore.
Geriss sidoo kale wuxuu leeyahay duubayaasha khafiifka ah ee khaanadaha loo adeegsado ee loogu talagalay waji-dhismeedka wejiga ama kabadh aan xero lahayn ayaa dooran kara.
Wajigii hore ee golaha jikada oo ku duulaya qulqulka khaanadda
Golaha jikada ee aan qaab-dhismeedka lahayn ayaa ka hooseeya orodyahannada dhaansha
Macluumaad dheeraad ah, ku soo dhowow inaad noo soo dirto baaritaan.
Telefoon: +8613764528018 (Wechat / WhatsApp)